Warbixin Muhiim ah ee Ku saabsan Mirirka Tuubada Qoyska iyo Biyahaaga Cabitaanka (Somali) | Lead Related Brochures | The City of Portland, Oregon
Warbixin Muhiim ah ee Ku saabsan Mirirka Tuubada Qoyska iyo Biyahaaga Cabitaanka
Tallaabooyin Sahlan ee Lagu yareeyo Gaarista Mirirka
Waxa aad u baahantahay in aad ogaatid
Ilaha biyaha lacabo ee Portland waxay buuxiyeen ama kasareeyaan dhamaan heerarka faadhawrka ee gobalka ama federaalka. Waan nasiib badanahay oo ilaheena biyaha inta badan lagama helo maadada macdanka. ataa ayadoo ay sidaas taha, ayadoo laga fiirinaayo nooca tuubooyinka gurigga kujira, guryaha qaarkood waxay lahaan karaa cadad maadada macdanka ah.
Warbixin muhiim ah ee ku saabsan mirirka biyahaaga cabitaanka
Xafiiska Biyaha Portland wuxuu ogaaday heerarka kacsan ee mirirka biyaha cabitaanka ee guryaha/dhismaha qaarkood. Mirirka wuxuu sababi karaa xaalad caafimaad oo halis ah, gaar ahaan haweenka uurka iyo carruurta yar. Fadlan si dhow u aqri warbixintaan si aad u aragtid waxa aad sameyn kartid si aad u yareysid mirirka biyahaaga cabitaanka.
Saameynada caafimaadka ee mirirka
Mirirka wuxuu sababi karaa dhibaatooyin caafimaad haddii wax badan galaan jirkaaga ee biyo cabitaanka ah ama illaha kale. Wuxuu ku sababi karaa waxyeelo maskaxda iyo kelyaha, oo wuxuu dhaxgeli karaa wax soorka unugyada dhiiga gaduudan ee u qaado oksijiin qeybaha oo dhan ee jirka. Halista ugu weyn ee gaarista mirirka waa ilmaha, carruurta yar, iyo haweenka uurka. Saynisyahanka wuxuu ku xiriiriyay saameynada mirirka maskaxda ee IQ hooseeya ee carruurta. Dadka weyn ee qaba dhibaatooyinka kelyaha iyo dhiig karka waxaa saameyn karta heerar hoose ee mirirka ee ka badan dadka weyn ee caafimaadan. Mirirka waxaa lagu keydiyaa lafaha, oo waxaana lagu siideyn karaa hadhowdii nolosha. Inta lagu jiro uurka, canuga wuxuu ka helaa mirirka lafaha hooyada, taas oo saameyn karto hormarka maskaxda.
Mirirka waxaa inta badan laga helaa meelo kala duwan oo deegaankeena oo dhan ah. Iyada oo mirirka marmar laga helo illaheena biyaha iyo aan jirin leeman adeega mirirka ee ku jiro qalabka biyaha, mirirka waxaa laga heli karaa guryaha qaarkood iyo dhismooyinka. Portland, mirirka wuxuu galaa biyaha la cabo ee ka imaado daxalka (dhammaanshaha) tuubooyinka guriga qalabyada ee wato mirirka. Qalabyadaan waxaa ku jiro mirirka alxanka ku saleysan ee loo isticmaalo isku dhajinta tuubada maarta – caadi ahaan lagu isticmaalo dhismaha guryaha ama la tubeeyay inta u dhaxeyso 1970 iyo 1985 – iyo qeybaha maarta iyo qasabadaha. - iyo qeybaha maarta iyo qasabadaha. Mirirka ku jirta tuubada guriga waxay ku baaba’daa biyaha cabitaanka marka biyaha fariistaan tuubooyinkaas dhoor saacadood, sida habeen dhaxa iyo markaad ka soo laabatid shaqada ama dugsiga.
Gudaha Portland, illaha ugu caadisan ee gaarista mirirka waa riinji mirir ku saleysan, busta guriga, ciida, aqabyada tuudabada. Mirarka waxaa sidoo kale laga helaa sheeyada qoyska kale sida boombalaha, qurxinta iyo digsiga.
Tallaabooyinka fudud ee lagu yareynayo gaarista cabitaanka biyaha:
Socodsii biyahaaga si aad mirirka uga daadisid. Haddii biyaha aanan la isticmaalin dhoor saacadood, socodsii qasabad walba 30 ilbiriqsi ilaa 2 daqiiqo ama illaa ay ka qabowdo ka hor inta aan la cabin ama lagu karin.
U isticmaal biyo qabow, oo cusub cunto karinta, iyo u diyaarinta caanaha ilmaha. Haku karin ama ha cabin biyaha qasabada kulul; mirirka si sahlan ayuu u galaa biyaha kulul. Haka isticmaalin biyaha qasabahada kulul si aad ugu sameysid caanaha ilmaha.
Ha karkarin biyaha si aad uga saartid mirirka. Biyo karkarinta ma yareyneyso mirirka.
Tixgeli isticmaalka fiiltarka. Hubi haddii ay yareyso mirirka – ma ahan in dhammaan fiiltarada ay sameeyaan. Iska hubi in aad joogteysid iyo badeshid qalabka fiiltarka sida waafaqsan tilmaamaha warshada si loo illaaliyo tayada biyaha. Kala xiriir Caalamiga NSF ee 800-NSF-8010 or nsf.org warbixin dheeraad ah ee heerarka waxqabadka ee fiiltarada biyaha.
Ka tijaabi canugaaga mirirka. Weydii dhaqtarkaaga ama soo wac Qadka mirirka si aad u ogaatid sida looga tijaabiyo canugaaga mirirka. Baaritaanka dhiiga ee heerka mirirka waa wadada kaliya lagu ogaanayo haddii canugaaga ay gaartay mirirka.
Ka tijaabi biyahaaga mirir. Kala xiriir Qadka mirirka leadline.org ama 503-988-4000 si aad u ogaatid sida loo helo tijaabada biyaha mirirka oo BILAASH ah.
Si joogta ah u nadiifi afka qasabada. Qeybaha wata mirirka ee ka imaado alxanka ama tuubooyinka guriga waxay ku xirmi karaan afka qasabadaada. Nadiifinta joogtada ah ee dhoor bilood ee walba ayaa ka saari karo qeybahaan iyo yareeyo gaarista mirirka.
Tixgeli iibsashada qalabyada mirirka-hooseeya. Laga bilaabo 2014, dhamaan tuubooyinka,Qalabaynta iyo Agabka waa inay ka koobnaadaan wax kayar 0.25% oo daxal ah. Goortii aad iibsaneysid qalabyo cusub, isticmaalayaasha waa in ay raadiyaan kuwa leh mirirka ugu yar.
Illaalinta caafimaadka bulshada
Xafiiska Biyaha Portland:
Yareysaa daxalka tuubada mirirka iyada oo la kordhinayo pH ee biyaha. Saxitaanka pH-kaan wuu yareeyay mirirka tuubada biyaha in ka badan kala bar. Si aad usii yarayno herarka macdanka biaha, Portland waay biloowday hanaan kor loogu qaadaayo daawada yaraysa daasha biraha. Huromarintani waxaa laysku duba rididoonaa muddo aan ka danbayn g'uga 2022.
Ka saaraa illaha la garanayo ee mirirka ee ka imaanaya nidaamka. Dhammaan xiriirada adeega mirirka ee la garanayo (pigtails) waxaa laga saaray nidaamka 1998.
Waay badalaysaa lmitarada waawayn, ee macdanka ee biaha siiya bulshooyinka khatarta ugu jiro sunta. Wax ka badan toban sanno dhammaan badelada miitarka ma laheyn mirir.
Illaha lagu yareynayo gaaristaada
IMarka lagasoo tago yaranta sunta macdanka ee kujirta biyaha lacabo, Laanta Biyaha ee Portland, oo kaashanasa LeadLine, waay taageero ufidinaysaa barnaamijyo lagu yaraynaayo dhamaan ilaha keena in sunta macdanku biyaha gasho:
Aqoon isweedaarsiga ka hortaga sumowga mirirka
Barnaamijyada yareynayo halisaha ee guryaha u qalma
Baaritaanka heerka mirika dhiiga carruurnimada oo BILAASH ah
Qalabyada baaritaanka mirirka biyaha oo BILAASH ah oo macaamiishooda ah
Laariir LeadLine: leadline.org ama kawac 503-988-4000.
Wixii macluumaad dheri ah, nagasoo wac 503-823-7525, ama booqo barteena interneetka oo ah portlandoregon.gov/water. Wixii macluumaad dheeri ah oo kusaabsan yaraynta sunta macdanka ee gurigaaga/dhismaha aad dagantahay iyo saamaynada caafimaad ee sunta macdanka, booqo webseetka EPA OO AH epa.gov/lead ama laxariir dhakhtarkaaga daryeelka caafimaadka.
Fadlan nalasoo xariir si aan turjumaad ama fasiraad kuugu samayno, ama aan goob ay kunastaan udiyaarino dadka naafada ah.
Xafiiska Biyaha Portland Qadka:503-823-7525
Adeega Macmiilka: 503-823-7770
Adeega Xiriirka Oregon: 711